မြတ်စွာဘုရားက “ ယုံကြည်၊ ကျန်းမာ ၊ ဖြောင့်မှန်စွာ ၊ ပညာ ၊ ဝီရိယ “ ဆိုတဲ့ အချက်တွေကို တရားကျင့်သူ ယောဂီတွေ လိုက်နာရမယ့် အချက်တွေအဖြစ် ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာ ဒီအချက်တွေဟာ တရားကျင့်သူတွေအတွက်သာ…
ဘုရင်မကြီးအယ်လီဇဘတ်ဟာ ကျန်းမာနေအောင် ဘာတွေလုပ်သလဲ? ကိန်းဘရစ်ခ်ျမြို့စားကတော်ဟာ ဘယ်လိုကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်အနေအထား လှပနေရသလဲ? Post Views: 94
တော်ဝင်စားဖိုမှူးဟောင်း ပြောပြတဲ့ အင်္ဂလန်ဘုရင်မကြီးရဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ
အင်္ဂလန် နိုင်ငံရဲ့ ဘုရင်မကြီး ဖြစ်တဲ့ ဒုတိယမြောက် အဲလိစဘတ် (Elizabeth II) ဟာ သက်တော် ၉၁ နှစ် ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး နန်းစံနှစ်ကလည်း ၆၅ နှစ်ရှိနေပါပြီ။ Post Views: 136
အန္တရာယ် ကင်းကင်းနဲ့ ပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ့် အလှတရား ( CRYSTAL TOMATO လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် မခင်ရဲရူပါအေးနဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း)
Published: February 1, 20167:13 am